ရောင်းဝယ် ဖောက်ကား အွန်လိုင်းစကား • A podcast on Anchor
ရောင်းဝယ် ဖောက်ကား အွန်လိုင်းစကား
By fastforward Myanmar
eCommerce နဲ့ ပတ်သက်တဲ့သိကောင်းစရာတွေကို ဆွေးနွေးပေးနေတဲ့ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
Episode 8: Online Store ပိုင်ရှင်တွေ ရှောင်ကျဉ်သင့်တဲ့ ဒီဇိုင်းအလွဲများ
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အတွေ့ရအများဆုံး ဒီဇိုင်းအယူအဆအလွဲ ၅ မျိုးကို မငယ်ဦးမွန်က ပြောပြထားပြီး လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဒီအလွဲတွေကို ဘယ်လိုရှောင်ကျဉ်သင့်တယ်ဆိုတာလည်းပဲ မျှဝေပေးထားပါတယ်။
Episode 7: သင့် Online Store အတွက် အသုံးဝင်မယ့် ဒီဇိုင်း Practices က ဘာတွေဖြစ်မလဲ?
အောင်မြင်တဲ့ Online Store တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ ဘယ်လိုသပ်ရပ်လှပတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ တည်ဆောက်လို့ရသလဲဆိုတာ ဒီတစ်ပတ်မှာ မငယ်ဦးမွန်နဲ့အတူ ရှာဖွေလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။
Episode 6: သေသပ်လှပတဲ့ဒီဇိုင်းဟာ ဘာကြောင့်အရေးကြီးသလဲ?
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မငယ်ဦးမွန်က ဒီဇိုင်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးပါပုံနဲ့အတူ Online မှာ Store တစ်ခုမစခင် ဘယ်လိုအချက်တွေကို ကြိုစဉ်းစားထားသင့်တယ်ဆိုတာပါ ပြောပြပေးထားပါတယ်။
Episode 5: ထိရောက်တဲ့ Marketing နဲ့ Online မှာ စျေးရောင်းမယ်
အွန်လိုင်းကတဆင့် စျေးရောင်းတော့မယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့၊ ရောင်းအားတက်စေဖို့ ထိရောက်တဲ့ marketing နည်းလမ်းတွေ လိုအပ်ပါတယ် ဒါကြောင့် ဒီ episode မှာ Media Buying Manager ဖြစ်တဲ့ ကို ဝင်းမြတ်ကို ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် ကိုဝင်းမြတ်က သူ့ရဲ့ marketing အတွေ့အကြုံတွေကို ဘယ်လိုဝေမျှထားလဲဆိုတာ နားဆင်ပေးကြပါနော်
Episode 4: တိုးတက်လာမယ့် မြန်မာ့ e-commerce အခွင့်အလမ်း
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက ဘယ်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းမဆို အွန်လိုင်းက ရောင်းဖို့ ဘယ်လောက်ထိ အဆင်သင့်ဖြစ်နေသလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဆွေးနွေးသွားပါမယ် ဆွေးနွေးမယ့်သူတွေကတော့ ကိုရဲမြတ်, ကိုကိုဝင်း နဲ့ ကိုဝင်းမြတ်တို့ ဖြစ်ပါတယ်
Episode 3: Covid19 ကြောင့် ပြောင်းလဲလာတဲ့ အွန်လိုင်းစျေးရောင်းဝယ်မှုအပေါ် အစိုးရက ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲ
အစိုးရက ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ e-commerce relief plan ဟာ အွန်လိုင်းစျေးရောင်းစျေးဝယ်လောကအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ဆွေးနွေးမယ့်သူတွေကတော့ ကိုရဲမြတ်မင်း၊ ကိုကိုဝင်းနဲ့ ကိုဝင်းမြတ်တို့ ဖြစ်ပါတယ်
Episode 2: COVID နဲ့အတူ ပြောင်းလဲလာတဲ့ စျေးဝယ်မှုပုံစံအသစ်
လက်တလော အခြေအနေတွေကြောင့် စျေးရောင်းစျေးဝယ်တဲ့ပုံစံဟာ ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ် ဒီလို အခြေအနေသစ်မှာ အသားတကျဖြစ်ဖို့ လူတွေဟာ ဘယ်လိုကြိုးစားနေကြသလဲဆိုတာကိုတော့ ကိုရဲမြတ်မင်းနဲ့ ကိုကိုဝင်းက သူတို့ရဲ့ အမြင်ကိုဖလှယ်ထားပါတယ်လို အပြောင်းအလဲနဲ့အညီ အခြေအနေသစ်မှာ အသားတကျဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုကြိုးစားနေကြသလဲဆိုတာကိုတော့ ကိုရဲမြတ်မင်းနဲ့ ကိုကိုဝင်းက သူတို့ရဲ့ အမြင်ကိုဖလှယ်ထားပါတယ်
Episode 1: စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် COVID ရဲ့သက်ရောက်မှု
Covid ကြောင့် ပြည်တွင်းစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ် ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ ခုလိုအကျပ်အတည်းတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးထားပါတယ်